Wasiirka Warfaafinta Itoobiya: Alshabaab wey sii burburayaan weyna kala cararayaan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Addis Ababa – Mareeg.com: Wasiirka warfaafinta Ethiopia Dr. Debretsion G/Michael ayaa waxaa uu sheegay in awoodii Alshabaab ay bur burtay oo aysan jirin hadda isla markaana Alshabaab ay ku jiraan kala carar, sdia uu yiri.
Wasiirka warfaafinta Ethiopia ayaa sidoo kale xusay in ciidamadoodu sii wedayaan dagaalka ka dhanka ah Alshabaab ee ay ka wadaan gudaha Soomaaliya.
Wasiirka ayaa waxaa uu sheegay in ciidamada Ethiooia ay Soomaaliya u joogan ciribtirka Al shabaab oo dagaalo kula jirta ciidanka dowladda iyo kuwa AMISOM waxaa uu xusay in ciidamadooda siday Soomaaliya u tageen ay Alshabaab ka saareen dhul badan oo ay horay u maamulayeen.
“Waxaa naga go’an in Alshabaab laga waayo Soomaaliya waan sii wadeynaa dagaalka waxaa naga go’an in dowladda Soomaaliya aan ka taageero dhinac kasta” ayuu yiri Dr. Debretsion G/Michael oo Addis Ababa kula hadlay arfidiyeennada.
Wasiirka ayaa tilmaamay in ciidamada Itoobiya iyo kuwa kale ee Afrika ay ka baxayaan Soomaaliya marka halkaas laga waayo Alshabaab, oo dowladda iyo shacabku isku filnaadaan.
“Markii Soomaaliya noqoto wadanka xasiloon sida dalalka Afrika ee Xasiloonidu ka jirto oo dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed isku filnaasho gaaraan waa ay ka soo bixi doonaan ciidamadeena iyo xitaa kuwa AMISOM waxaana isku” ayuu yiri sidoo kale yiri wasiirkaasi.
Warka kazoo baxay wasiirka warfaafinta Itoobiya ee ah in Alshabaab jabeen ayaa kusoo beegmay xilli dhowr maalmood ka hor Alshabaab gobolka Galgaduud kusoo bandhigeen meydka labo ka tirsan askarta Itoobiya oo ay sheegeen iney dagaal ku dileen.
Ciidamada Itoobiya oo ku biiray AMISOM ayaa ku sugan gobollada Galgaduud, Hiraan, Bakool, Baay iyo Gedo.